Isitolo sezimpahla sodumo siphule umthetho ngokukhokhisa amakhasimende imali kungafanele | isiZulu
Isitolo sezimpahla sodumo siphule umthetho ngokukhokhisa amakhasimende imali kungafanele
URingo unikezwe umnqamulajuqu ngesikweletu sentela
Uhulumeni uzokwelekelela uSanral
Cape Town – Uhlaka olulawula izikweleti kuleli, iNational Credit Regulator (NCR) ngoLwesibili ludlulisele isitolo sezimpahla esidumile kuleli, uFoschini, kwi-National Consumer Tribunal ngokuphula umthethetho iNational Credit Act.
Lokhu kudluliselwa kukaFoschini kulolu hlaka kulandela uphenyo lwe-NCR, oludalule ukuthi uFoschini ubulokhu ukhokhisa amakhasimende awo imali yekilabhu (club fee) uma ngabe benza izivumelwano zokuthatha ngesikweleti.
“Imali yekilabhu ekhokhiswa wuFoschini iyavela ezivumelwaneni zezikweleti zamakhasimende,” i-NCR isho kanjalo esitatimendeni ngoLwesibili. “Ukukhokhiswa kwemali yekilabhu ezivumelwaneni zezikweleti akuvunyelwe [umthetho] iNational Credit Act.
OLUNYE UDABA: Sidonsa kanzima isitolo sefenisha sodumo esesehlelwa yinzuzo
“I-National Credit Act ivumela amakhasimende ukuthi anikwe isitatimende esichaza ngezindleko zesikweleti (quotation) ngaphambi kokuba asayine izivumelwano zesikweleti,” kusho uJacqueline Peters, weNCR. “Amakhasimende kumele acele lesi sitatimende kubahlinzeki bawo bezikweleti ukuze ezokwazi ukubhekisisa izindleko zesikweleti esinikezwelayo.”
Manje iNCR isifuna ukuthi ukuthi iNational Consumer Tribunal iyalele uFoschini ukuthi abuyisele amakhasimende athintekayo le mali owawuwakhokhisa yona.
Ifuna nokuthi uFoschini enze ucwaningo oluzimele ngebhuku lezikweleti lalesi sikhondlakhondla sesitolo ngenhloso yokuthola ukuthi bangaki ngempela abantu okumele babuyiselwe imali yabo.
Ngaphezu kwalokho, iNCR iphinde ifune nokuthi lolu hlaka luvimbele uFoschini ukuthi ukhokhise amakhasimende imali yekilabhu ezivumelwaneni zezikweleti bese luphinda luhlawulisa uFoschini imali efanalekile.
I-NCR yadlulisela uMr Price kulo lolu hlaka ngokuphula umthetho ofanayo ngoJuni. NgoMeyi, lolu hlaka lwalahla ngecala esinye isikhondlakhondla senkampani yezitolo ezithathisa ngezikweleti, u-Edcon, ngodaba olufanayo.
I-NCR ithi izoqhubeka nokwenza uphenyo kuyo yonke le mboni yezikweleti ukuqinisekisa ukuthi iwusiphula nezidindi umkhuba wokukhokhiswa kwamakhasimende izimali ngokungemthetho.
Bromhof - 15:02:27 PM TRAFFIC LIGHTS not working at Tin Road - POINTSMEN ON DUTY Ezinye zasemigwaqeni